यस्तो छ आज २०७५ साल फाल्गुन ५ आइतबार तपाईहरुको राशिफल - Experience Best News from Nepal
यस्तो छ आज २०७५ साल फाल्गुन ५ आइतबार तपाईहरुको राशिफल
वि.सं.२०७५ साल फाल्गुन ०५ गते । आइतबार । इस्वी सन् २०१९ फेब्रुवरी १७ तारिख । नेपाल संवत् ११३९ । विरोधकृत संवत्सर । उत्तरायण । शिशिर ऋतु । श्रीशाके १९४० । माघ शुक्ल पक्ष । तिथि त्रयोदशी,४९ घडी ३४ पला । नक्षत्र पुनर्वसु,१८ घडी ४६ पला,दिउँसो ०२ बजेर १२ मिनेट उप्रान्त तिष्य । योग आयुष्मान,२८ घडी ४६ पला,बेलुकी ०६ बजेर १३ मिनेट उप्रान्त सौभाग्य । करण कौलव,दिउँसो ०३ बजेर ३९ मिनेट उप्रान्त तैतिल,रातको २ बजेर ३२ मिनेट उप्रान्त गर । आनन्दादिमा ध्वज योग । चन्द्र राशि मिथुन,बिहान ०८ बजेर ३४ मिनेट उप्रान्त कर्कट । प्रदोष व्रत। सौभाग्य–शूर्पदान। काठमाडौँमा सूर्योदय ०६ बजेर ४२ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर ५५ मिनेट । दिनमान २८ घडी ०३ पला ।
चलचित्र तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा समय बित्नेछ । गीत सङ्गीत तथा मोडलिङमा विशेष चासो बढ्नेछ । पढाई लेखाइमा मन जाने हुनाले सफलता हात लाग्नेछ । व्यवसायमा प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ भने आर्थिक क्षेत्र मजबुत रहनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा समय लगानी गर्नेहरूले पद प्राप्तिको योग बन्नेछ । प्रणय सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ भने पति पत्निबिच मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ । बिहानको समय मध्यमय रहेकोले आफन्तसँग विवाद हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।
काम गर्दा कानुनको पालना राम्रोसँग गर्नुहोला राज्यबाट दण्ड तथा जरिवाना हुन सक्छ । माया प्रेमको दुरी बढ्ने हुनाले मनमा नरमाइलो महसुस हुनेछ । यात्राको क्रममा रुपैयाँ पैसाको सही परिचालन गर्न नसक्दा खर्च बढ्नेछ । वैदेशिक यात्राको तय हुनेछ भने विदेशी सामान तथा रुपैयाँ पैसा हातलागी हुने योग रहेको छ । विदेशमा बसेर अध्ययन तथा काम गर्नेहरूले आजको दिन आफ्नो कामदेखि सन्तुष्ट हुनेछन् । बिहानको समय राम्रो रहेकोले पढाइमा मन जानेछ ।
व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने धन आगमनको गतिलो योग रहेको छ । बैक तथा वित्तीय क्षेत्र सँग सम्बन्धित कारोबारहरू बढेर जानेछ । तरल पदार्थ तथा खनिज पदार्थको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि समय राम्रो रहेको छ । पैतृक धन तथा सम्पत्तिको प्रयोग मार्फत मनग्गे आम्दानी हुनेछ । आर्थिक अवस्था राम्रो हुने हुनाले दैनिक फेरिनेछ ।
विभिन्न ठाउँबाट कामका प्रस्तावहरू आउनेछन् भने प्रशस्त रुपैयाँ पैसा कमाउने योग रहेको छ । व्यस्तताका बाबजुद पनि उपलब्धिमूलक कामहरू गर्न सकिने ग्रहयोग रहेको छ । भनेको समयमा सामाजिक कामहरू बन्ने हुनाले छोटो समयमा नाम तथा दाम कमाउन सकिने हुँदा घर परिवारमा खुसीयाली छाउनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ । नयाँ नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने नोकरीमा पदोन्नति हुनेछ ।
बौद्धिकताको प्रयोगले सफलताको सूत्र पत्ता लगाउन सकिनेछ भने उत्तम वस्त्र,मन पर्ने तथा विलासी बस्तु हात लागि हुनेछ । धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमा चासो रहने तथा संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने काममा समय व्यातित हुनेछ । भाग्य तथा समयले साथ दिने हुँदा सानो लगानीबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ । प्रेमलाई विवाहरुपी निकास दिने सहमति जुट्ने योग रहेको छ । बिहानको समय मध्यमय रहेकोले भौतिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
काम बढेपनि आम्दानी भने न्यून हुनेछ । न्यून पारिश्रमिकमा दिनभर समय खर्चिनु पर्दा मन खिन्न हुनेछ । आफन्त तथा दिदी बहिनी सँग सानो सानो कुरामा विवाद सिर्जना हुनेछ । पढाई लेखाइमा ध्यान जाने छैन भने विभिन्न अवसर आएपनि सदुपयोग गर्न नजान्दा अरू भन्दा धेरै पछि परिनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आई उपचार खर्च बढेर जानेछ भने प्रेममा अविश्वास बढ्ने तथा धोका हुनेछ । बिहानीपखको समय उत्तम रहेकोले पढाई लेखाई तथा व्यापार राम्रो हुनेछ ।
पर्दा साथ दिनेहरू प्रशस्त भेटिने हुँदा मन प्रसन्न हुनेछ । परिवारका साथ देश विदेशको यात्राको तय गर्न सकिनेछ । स्थाई सम्पत्तिको भरपुर प्रयोग गर्न पाइनेछ । नाफा मूलक काम गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ भने सेवा मूलक काम गरी नाम पनि कमाउन सकिने हुनाले मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ । अध्ययनमा मन जानेछ । बिहानको समय मध्यमय रहेकोले मुद्दा मामिला तथा यस्तै विषयमा सामेल भए हारिने सम्भावना रहेको छ ।
इष्टमित्र तथा आफन्तका साथ रमाइलो यात्राको अवसर जुर्ने तथा मिठा मिठा परिकार ग्रहण गर्दै दिन कटाउन सकिनेछ । अदालती निर्णयहरू तपाइकै पक्षमा आउने तथा शत्रु परास्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । अध्ययन अध्यापनमा सुधार हुनुको साथै पुरस्कार जित्न सकिनेछ । व्यापार व्यवसायमा लगानी बढाई आम्दानीका स्रोतहरू बढाउँदै लान सकिनेछ । विशिष्ट व्यात्तिको सहयोगमा राम्रा योजनाहरू फुर्ने ग्रहयोग रहेको छ ।
खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा भनेजस्तो नतिजा आउने हुनाले पढ्न लेख्न जोस जाँगर बढ्नेछ । विलासिताले खर्च बढाएपनि भौतिक सम्पत्ति तथा उपहार प्राप्तिको गतिलो योग रहेको छ । आर्थिक समस्या सुल्झाउदै शिक्षा तथा बैङ्किङ क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिनेछ । वंश वृद्धिको गतिलो योग रहेको छ भने नोकरीमा बढुँला हुने योग रहेको छ । बौद्धिकताले सम्मान दिलाउनेछ । बिहानको समय मध्यमय रहेकोले सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
आज मङ्गलबार, तपाइको राशिफलले आजको तपाइको दिनको बारे के भन्छ !! पढ्नुहोस् आजको राशिफल
यस्तो छ आज २०७५ साल माघ २६ गते शनिबार तपाईहरुको राशिफल
आज मङ्गलबार !! गणेश भगवानको दर्शन गर्दै पढ्नुहोस आजको तपाइको भाग्य रेखा !!
आज मंगलबारको राशिफलले तपाईंलाई के भन्छ ? जान्नुहोस्
आज आइतबार, छोटकरीमा आजको तपाइको दिनको बारे राशिफलले के भन्छ !! जान्नुहोस्
आज सोमबार, राशि अनुसार तपाइको आजको भाग्य रेखा हेर्नुहोस !!
आज आइतबार, तपाइको राशिफलले आजको दिनको बारे के भन्छ !! पढ्नुहोस राशिफल छोटकरीमा
आज शनिबार, तपाइको आजको दिनको बारे राशिफलले के भन्छ !! पढ्नुहोस आजको राशिफल छोटकरीमा
आज विहिबार, आजको राशिफलले तपाइको आजको दिनको बारे के भन्छ !! पढ्नुहोस छोटकरीमा
आज मंगलबार, आजको तपाइको दिनको बारे राशिफलले के भन्छ !! पढ्नुहोस आजको राशिफल छोटकरीमा
आज बिहीबार, राशिफलले आजको तपाइको दिनको बारे के भन्छ !! पढ्नुहोस आजको राशिफल छोटकरीमा
आज बुधबार, राशिफलले आजको तपाइको दिनको बारे के भन्छ !! पढ्नुहोस आजको राशिफल छोटकरीमा